Ko Gyi Zein's Ho-sat-sat D-sat-sat: 2013
Posted by Ko Gyii at 10:16 AM No comments :
ရသစာပေ၏ အခန်းကဏ္ဍ-စာရေးဆရာ ချစ်ဦးညို (တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသူ ဦးကိုကိုလှိုင်)
Intellectual Talk No-3 Chp 3
Posted by Ko Gyii at 8:56 AM No comments :
မြန်မာစာ မြန်မာဂီတ - ဦးမြင့်ကြည် (တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသူ ဦးကိုကိုလှိုင်)
Intellectual Talk No-3 Chp 2
Posted by Ko Gyii at 8:54 AM No comments :
လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် ဘာသာစကား၏ အခန်းကဏ္ဍ - ဆရာမောင်ခင်မင်(ဓနုဖြူ) (တွေ့ဆုံဆွေ...
Posted by Ko Gyii at 8:49 AM No comments :
စက်ထဲက တွေ့တာလေးတွေ တင်လိုက်တာ...
Posted by Ko Gyii at 10:38 AM No comments :
MP3 ဖိုင်ထဲ သီချင်းစာသား နဲ့ ခွေကာဗာပုံ ထည့်ကြည့်ရအောင် [WMP9 Add Lyric Album Art toaMP3 file].pdf
MP3 ဖိုင်ထဲ သီချင်းစာသား နဲ့ ခွေကာဗာပုံ ထည့်ကြည့်ရအောင် [WMP9: Add Lyric / Album Art toaMP3 file]
Posted by Ko Gyii at 11:55 PM No comments :
ငါ့မှာ ပို အကျိုးမယုတ်ပေမည့်၊
မဲရီဒဲရီ (ﾒﾘﾃﾞﾘ) ကြား လမ်းရွေးမမှားရအောင်၊
ဆက်ဆက် သောက်လိုက်စေချင်တယ် သူငယ်ချင်း။
မဲရီဒဲရီ (ﾒﾘﾃﾞﾘ)　= Merit-Demerit
ပိဿလေးဘေးပစ် ပြောတတ်သော ကျနော်နှင့် ထစ်ကနဲရှိ စိတ်ခုတတ်သော သူငယ်ချင်းအတွက် အမှတ်တရ
Posted by Ko Gyii at 8:54 PM No comments :
~~ အချက်ပေးဥဩ ~~
ဘဝရထား လမ်းဆုံး ဘူတာများ ရောက်လာပြီလား ငယ်စဉ်ကချီပိုး ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေး ဦးလေးတစ်ယောက် မနေ့ကခေါက်ကနဲသေ ခုနေ ကျုပ်အဘေ ဘယ်လိုနေရှာမလဲ
Posted by Ko Gyii at 8:51 PM No comments :
ဝင်းဒိုးအိပ် တစ်လုံး အမြန်သုံးရအောင်
ယောနယ်ကပါ ယောတိယောရာ ယောဆရာတစ်ဦး၊
ကွန်ပျူတာနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ အမေးအဖြေ ဆွေးနွေးခန်းကိုလာ၊
ဆေးအိတ်ကို အသာချ၊ လူနာတွေက FOC (အဲ.. တန်းလို့စီ)
ကုရမ်းမဟဲ့ ဟန်ပြင် (ဘွာတေး ဘွာတေး ကုစမ်းမဟဲ့ ဟန်ပြင်)၊
မပိုင်ဆို ဂလိုင်မခေါက် နောက်ပေါက်က အသာလစ်ခဲ့ရ။
ဝင်းဒိုးရှစ်အတွက် ဆေးအဖုံဖုံ စုံအောင်စမ်းချင်မိ၊
နုတ်ဘုတ်က မောက်ပက်ဆိုတာပင် မပွတ်ဘူးဟေး၊
ကျစ်ထားတာလေး ဖြန့်ကာ ရေမိ၊
မမျက်ပါနဲ့ မဒမ်ဧးရေ မင့်နားဆွဲပလန် အသာဆိုင်း၊
ကျုပ် ရွှိုင်းဘို့ ဝင်းဒိုးအိပ် တစ်လုံး၊ ကလုန်းပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊
ဝယ်ဖြစ်အောင် ဝယ်ကြစို့ရဲ့။ (ချော့တော့ ချော့ကြည့်ရမှာပ)
နားမချခင်စပ်ကြား နိုင်ငံဂျားက တူကြီးများ၊
ခံငြင်းရခက်တဲ့ Sanlin Htet နဲ့ ငပိချက်မက်တဲ့ စပိနပ်၊
နေရာတကာပါသည် C Zarni၊ ခပ်ပြတ်ပြတ်အတည် AC Vs DC တို့၊
မင့်ရို့ဘကြီးဖြစ်အင် အပြစ်မမြင် ချစ်ခင်တယ်ဆိုရင်တော့၊
အမြန်သုံးရအောင် စာပုံးကနေ ပို့လိုက်ကြကွယ်ရို့ ....။
အမည်မသိ ရှေးစာဆို (၂၀၁၃) တွင် ရေးဖွဲ့ခဲ့သည်။
Posted by Ko Gyii at 11:06 PM 1 comment :
မြန်မာကိန်းဂဏန်းရေတွက်ပုံ Library ဆောက်ပြီးခဲ့ပါပြီ။ ၎င်း၏ လုပ်ဆောင်ပုံပြ Demo ဗားရှင်းလည်း အကြမ်းဖျင်းရေးဆွဲပြီးပါပြီ။ ရှစ်လေးလုံး ငွေရတု နှစ်ပတ်လည် အမှတ်တရ ဒီနေ့မှာ Upload တင်လိုက်ပါတယ်။ အားပေးကြပါဦး﻿
Youtube link http://youtu.be/StqDgxzNvMg
youtube link http://www.youtube.com/watch?v=k6eJz6hrTUg&feature=youtu.be
Posted by Ko Gyii at 11:57 PM No comments :
ဒေါက်တာအရှင် နန္ဒမာလာဘိဝံသ ၏ သာရဏီယတရား
ဓမ္မဒါန PDF ကို ဒီလင့်မှာ ဒေါင်းပါရန်
Posted by Ko Gyii at 10:10 AM No comments :
ရှေးခေတ်မြန်မာသိပ္ပံကျမ်းများ - ဒေါက်တာမျိုးသန့်တင်
Posted by Ko Gyii at 12:44 AM No comments :
Android , iOS , Flash ဒါမှမဟုတ် HTML5 နဲ့ ဆော့ဝဲ လွယ်လွယ်ကူကူ ဆောက်ချင်ရင်
Android , iOS , Flash ဒါမှမဟုတ် HTML5 နဲ့ ဆော့ဝဲ လွယ်လွယ်ကူကူ ဆောက်ချင်ရင် သုံးနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပရိုဂရမ်းမင်းအကြောင်း နားလည်စရာမလိုပဲ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားရင် စမ်းသုံးကြည့်ပါ။
ဆောက်ပြီးသား နမူနာဖိုင်တွေလည်း ပြထားပါတယ်။
- "Kirk vs Picard" app.
- "Whack-A-Mole" style game.
- "Bacon-Web-Browser" for iOS and Anrdoid.
- "Choose Your Own Adventure" Game.
ဝင်းဒိုးမှာ တင်ရန် ဆော့ဝဲဖိုင်
Simple Software Creator [ http://lunduke.com ]
One simple project creates apps for:
Android [Java / Android SDK]
iOS [Objective-C / Cocoa Touch]
PyGTK for Desktop or Maemo [Python / GTK]
Flash [ActionScript / MXML / Flex]
If you haveacomputer running Windows or MacOS or Linux... then you can build your own apps.
All apps use the native programming language and framework for each platform. Not custom run-time engines or virtual machines. iOS apps are written in pure Objective-C. Android apps in pure Java. This leads to maximum performance, maximum extensibility and maximum awesomeness.
Illumination includesapowerful, and easy to master, user interface designer. Design the look and feel of your app quickly -- without needing to learn how to use any complicated tools.
Want to get up to speed inahurry? Here isasampling of short, easy to follow, tutorial videos and sample projects:
- Builda"Kirk vs Picard" app.
- Builda"Whack-A-Mole" style game.
- Builda"Bacon-Web-Browser" for iOS and Anrdoid.
- Builda"Choose Your Own Adventure" Game.
You can download the current version of Illumination Software Creator from the download page @ http://lunduke.com/
Posted by Ko Gyii at 12:36 AM No comments :
Boot တက်တဲ့ OS စာရင်းကို အလွယ်တကူ ဝင်တည်းဖြတ်ချင်ရင်...
Windows vista က စလို့ နောက်ပိုင်း ဝင်းဒိုးတွေမှာ Boot တက်တဲ့ OS စာရင်းကို ဝင်တည်းဖြတ်ချင်ရင် bcdedit ကွန်မန်းကို Command Prompt ထဲကနေ ဝင်သုံးရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အရေးပေါ် တည်းဖြတ်ချင်ရင် EasyBCD လို GUI (Graphical User Interface) ပါတဲ့ ဆော့ဝဲနဲ့ Boot တက်တဲ့ OS စာရင်းကို အလွယ်တကူ ဝင်ပြင်နိုင်ပါတယ်။ အခု EasyBCD ကို အတက်တွဲပေးထားပါတယ်။ တက်ိုယ်ရေသုံးအတွက် ဖရီးဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ အင်စတောလုပ်သုံးရုံပါပဲ။
Posted by Ko Gyii at 12:08 AM No comments :
printer share မရတာ
ကျွန်တော် printer 1လုံးကို ကွန်ပျူတာ ၃ လုံးကနေ print ထုတ်ချင်လို့ 
share လုပ်တာ အဆင်မပြေ လို့ ကူညီပေးကြပါအုန်းခင်ဗျာ။ ကွန်ပျူတာ ၃ လုံး
စလုံးက ping လို့ ရပါတယ် ။ printer share မရတာပါ ခင်ဗျား။ အားလုံးကို
Network Printer မဟုတ်ပဲ PC တစ်လုံးမှာ USB (or) parallel cable နဲ့
တွဲထားတဲ့ Printer လို့ ယူဆပါတယ်။ ဒါဆိုရင်...
1) File & Print Sharing protocol ကို PC အသီးသီးက Network Adapter မှာ
2) PC အသီးသီးက Firewall မှာ File & Print Sharing ကို ဖွင့်ပေးရပါမယ်။
3) PC အသီးသီးမှာ ၎င်း Printer Driver ကို Install လုပ်ပါ။
4) နောက် Printer တွဲထားတဲ့စက်ကနေ ၎င်း Printer ကို Share ပေးလိုက်ပါ။
5) အပေါ်က ရှယ်ပေးတဲ့ ပရင့်တာကို အခြား PC များရဲ့ Printer စာရင်းမှာ
လာပေါ်ရင် Print ထုတ်လို့ ရပါပြီ။
Posted by Ko Gyii at 11:52 PM No comments :
Posted by Ko Gyii at 7:04 AM No comments :
MP3 ဖိုင်ထဲ သီချင်းစာသား နဲ့ ခွေကာဗာပုံ ထည့်ကြည့်ရ...
Android , iOS , Flash ဒါမှမဟုတ် HTML5 နဲ့ ဆော့ဝဲ လ...
Boot တက်တဲ့ OS စာရင်းကို အလွယ်တကူ ဝင်တည်းဖြတ်ချင်ရ...